Izindaba - I-PET Rope Filament Production Line ukulethwa eTajikistan
Ukulethwa kwe-PET Rope Filament Production Line ukulethwa eTajikistan
NgoJuni 10, 2020, sahlela ukuthunyelwa kwezintambo entanjeni yokukhiqiza intambo yefilimu ye-PET eyalelwe ikhasimende laseTajikistan. Ukuthumela kwenziwa ngesitimela, ngakho-ke ikhasimende lingazithola izimpahla ngokushesha.
Ngenxa yethonya le-COVID-2019, cishe wonke amazwe emhlabeni asebenze ukuvalwa kwamazinga ahlukahlukene ukulawula ukusatshalaliswa kwe-COVID-2019.
Kepha ngenxa yokudluliselwa komuntu kumuntu kwe-COVID-2019, ukusakazeka kuyashesha, ikakhulukazi emazweni avaliwe noma angazilandeli izinyathelo zokuphepha zesayensi. Inani labantu eliqinisekiswe nge-COVID-2019 emhlabeni wonke lifinyelele cishe ku-7,000,000, okuyisibalo esimangazayo.
Ngaphandle kwalokhu, imikhiqizo yethu ithole imibuzo eminingi kumakhasimende aphesheya, futhi izinga lokuqinisekiswa kwe-oda lihle kakhulu. Umugqa ophelele wokukhiqizwa kwentambo ye-PET eyalelwe ikhasimende laseTajikistan ekuqaleni konyaka uphelile futhi wethulwa ngesikhathi.
Le ntambo yokukhiqiza isebenzisa izinto eziyi-100% ezenziwe kabusha ze-PET. Ukusuka ekukhiqizweni kwentambo yentambo kuya ekukhiqizweni kwemikhiqizo yezintambo ngumshini ophethe izintambo, konke kuyazenzakalela, cishe akukho msebenzi odingekayo. Ngoba izinto ezingavuthiwe ziyinto esetshenzisiwe eyenziwe kabusha, izindleko zokukhiqiza ziphansi, inzuzo ibhekwa kakhulu kumakhasimende ethu ngokuthengisa umkhiqizo wezintambo emakethe. Lo msele wokukhiqiza intambo we-PET nawo ungasetshenziswa ukukhiqiza inetha lokuphepha lepulasitiki, inethi yokufakazela izinambuzane njll.
Emikhiqizweni yethu, akunandaba kusuka ekuxhumaneni kwabasebenzi kokuqala, ukuqinisekiswa kwe-oda, ukukhiqizwa kwakamuva kanye nokulethwa kwemishini, amakhasimende anelisekile kakhulu. Siyethemba abathengi bangathola imishini ngokushesha okukhulu, bayifaka ekukhiqizweni futhi bathole inzuzo enhle. Lokhu akufikanga kalula uma kubhekwa ithonya le-coronavirus yomhlaba ekuwohlokeni kwemakethe.